ချစ်ကြည်အေး: အန်တီချစ်ကြည်အေးရေးတဲ့ သင်္ကြန်လွန်စာ
သင်္ကြန်မတိုင်ခင်မှာ ရေးကြတဲ့စာကို သင်္ကြန်စာလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ခုလို သင်္ကြန်လွန်ပြီးခါမှ ရေးချင် လွန်းလို့ ရေးလိုက်တဲ့စာကို အန်တီချစ်ကြည်အေးက သင်္ကြန်လွန်စာလို့ ခပ်တည်တည်ပဲ ခေါင်းစဉ် တပ်လိုက်ပါတယ်။
အများ-ဟုတ်ကဲ့ ဘာမှ မတတ်နိူင်ပါဘူး အန်တီ
အဟမ်း။ ဒီလိုလေ အန်တီချစ်ကြည်အေးတို့ ရက်သတ္တနှစ်ပတ်လောက် ပျောက်သွားတယ်။ သတိထားမိကြလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ အမေနဲ့ရွာကို လွမ်းတယ်ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်အကြီးကြီးတပ်လို့ ရွာအပြေးပြန်သွားခဲ့တဲ့ အန်တီချစ်ကြည်အေးဟာ ရွာရောက်တော့ တာလမ်းမပေါ် ရွာရိုးနဲ့ ကိုးပေါက် လျှောက်တော့တာ။ တစ်အိမ်ဝင် တစ်အိမ်ထွက် လည်တော့တာ။ အမေ့ဆီကိုတော့ ရောက်တဲ့နေ့ တစ်ရက်ပဲ မျက်နှာသွားပြ၊ ထမင်းတစ်နပ်စားပြီး ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာ စာဥတို့ သူငယ်ချင်းမတွေ ရေခပ်ဆင်းလို့လာ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ညည်းလို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လုံးထွေး၊ စားသောက်၊ လည်ပတ်နေခဲ့တာ။ ပျော်သလားမေးရင်တော့ ပျော်တာပေါ့ အမေရယ်ပဲ ဆိုလိုက်ချင်တယ်။
ဒီလိုလေ။ အန်တီချစ်ကြည်အေး ရွာရောက်သွားတဲ့အချိန်ဟာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အတာကူးတဲ့ တန်ခူးလ၊ နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကိုကူးပြောင်းတော့မဲ့ သင်္ကြန်ကာလကြီး ဖြစ်လို့နေသတဲ့ကွယ်။ ဒီတော့ တွေ့ခဲ့ရတာတွေက ပိတောက်တွေ၊ သင်္ကြန်ကားတွေ၊ လူတွေ လူတွေ…ရေတွေ ရေတွေ၊ တိုတိုပြတ်ပြတ်တွေ။
မဏ္ဍာပ်ပေါ်မှာ၊ သင်္ကြန်ကားပေါ်မှာ၊ လမ်းမပေါ်မှာ ကောင်မလေးတွေ၊ ကောင်လေးတွေ ခုန် ခုန် ခုန်။ မဏ္ဍပ်ကြီးလည်း ခုန် ခုန် ခုန်။ ဘီယာတွေလည်း ခုန် ခုန် ခုန်။ အပေါ်ဟိုက်ဟိုက်၊ အောက် တိုတို ပြတ်ပြတ်လေးတွေလည်း ခုန် ခုန် ခုန်နေလိုက်ကြတာ။ ခမျာများ ရာသီဥတုနဲ့လိုက်လျောညီထွေ တိုကြရရှာလေတယ်။ ရာသီဥတုကလည်း ကြွပ်နေ ရွနေအောင် ပူသကို….။
သိကြားမင်းနဲ့ သူ့တပည့် မာတလိတောင် ဒီနှစ် ကွာတားပန်န်နဲ့ ဆင်းကြတယ် ဆိုလား။ အေးလေ ရာသီဥတုက အတော် ပူပါတယ်ဆိုနေ။
မဏ္ဍာပ်ကြီးတွေရှေ့မှာများ ကားတွေ ကျောက်ချထားသလား မှတ်ရတယ်။ ရွေ့နိူင်ခဲလွန်း တယ်။ ဖြစ်နိူင်ရင် ရေကစားမဲ့ကားတွေကို လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်း သပ်သပ်။ ဖြတ်သွား ဖြတ်လာ ကားတွေအတွက် အလယ်မှာ လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်း သပ်သပ် ပေးထားသင့်တယ်။ ခုတော့ ကားတွေ အကုန်ကြပ်ပိတ်ကုန်တော့ ရေပက်ခံမဟုတ်တဲ့ကားတွေ အတော်လေး ဒုက္ခတွေ့တယ်။ မလိုအပ်ဘဲ အချိန် ကုန်တယ်။ လူပမ်းတယ်။
ကားတန်းကြီးထဲ စောင့်နေတုန်း အန်တီချစ်ကြည်အေးလည်း ကားထဲမှာ မှန်တံခါးပိတ်ပြီး ကားဆရာ နဲ့ လေရိုက်ရတာပဲ။ ကားဆရာ ပြောတာက ဒီနှစ် တစ်ချို့ မဏ္ဍာပ်ကြီးတွေ ပိတ်လိုက်ရတယ်တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ကာ မကိုက်လို့တဲ့။ ဒုန်းဒုန်းဒိုင်းဒိုင်းတွေ ဖွင့်ဖို့ အသံသေတ္တာငှားရ၊ အမ်ပလီဖိုင်ယာငှားရ၊ အဲလိုစက်တွေ ငှားရတာကိုက သိန်း၆၀လောက်ရှိသတဲ့။ မဏ္ဍာပ်အတွက် ပါမစ်ကပဲ သိန်း၃၀လောက် ပေးရသတဲ့။ မဏ္ဍာပ်ဆောက်၊ ပိုက်တွေသွယ်၊ ဘာညာတွေ ပေါင်းရင် မဏ္ဍာပ်တစ်ခုရဲ့ စရိတ်က သိန်း၁၅၀လောက်ရှိသတဲ့။ ရေပက်တဲ့သူ မပြည့်တဲ့အခါ သူတို့အတွက် မကိုက်ဘူး ဆိုပါတော့။
တစ်ချို့မဏ္ဍာပ်တွေမှာဆို တစ်ရက်ပက်ရင် နှစ်သောင်း၊ သုံးရက်ဆို ငါးသောင်း။ ထမင်းပါ ကျွေးရမယ်ဆို တစ်ရက် နှစ်သောင်းခွဲ၊ ကားအကြို အပို့ပါ ပါရင် သုံးသောင်း အဲလိုယူကြတာလို့ ပြောပြတယ်။
မဏ္ဍာပ်ကြီးတွေနားမှာ ဘန်းကလေးတွေချပြီး ဘီယာရောင်းတဲ့ သူတွေတောင် တစ်ဘန်းစာနေရာ အတွက် ငါးသောင်းပေးရတယ်တဲ့။ သူတို့ဘန်းကလေးတွေပေါ်မှာ အစုံတွေ့ရတယ်။ ဘီယာ၊ ရောစပ်သောက်ဖို့ ကျွဲရိုင်း၊ ငါးမန်း၊ သောက်ရေသန့်တွေပေ့ါ။
တစ်ရက် သင်္ကြန်ချိန်ကျော် ညဘက် လမ်းလေးဘာလေး လျှောက်ကြတော့ နေ့လည်က ရေကစား ထားကြတဲ့ နေရာတွေမှာ အမှိုက်တွေ၊ အမှိုက်တွေဆိုတာ ဖွေးနေအောင် တွေ့ရတယ်။ ပလတ်စတစ်တွေ၊ ဖော့ခွက်ဘူးခွံတွေ ဆိုတာ ဖွေးဖွေးကို လှုပ်လို့။ ဗွက်တွေလည်းပေါက်လို့။
အနီးအနားမှာ အမှိုက်ပုံးများ ရှိမလားလို့ ရှာကြည့်မိသေးတယ်။ မတွေ့ပါဘူး။ ဒီတော့လည်း လူတွေက လွယ်လွယ်ပစ် ခဲ့ကြတာပေါ့။ ကားပေါ်ကနေ တံတွေးထွေးချတဲ့ သူတွေက ရှိသေးတယ်။ အန်တီချစ်ကြည်အေးတို့ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာက အမှိုက်ကို စံနစ်တကျ စွန့်ပစ်ဖို့ အသိပေး၊ ပညာပေး တဲ့နေရာမှာ အင်မတန် အားနည်းကြတာကလား။ ဖြစ်နိူင်ရင်တော့ အမှိုက်ပစ်ဖို့ Rubbish bin အမှိုက်ပုံး အကြီးကြီးတွေ လမ်းတစ်လျှောက် ခပ်ကျဲကျဲချထားပေးနိူင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိတယ်။ အမှိုက်က မသိမ်းတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သိမ်းပါတယ်။ သင်္ကြန်ပွဲကြီးပြီးလို့ နောက်ဆုံးအတက်နေ့မှာ အမှိုက်တွေ လိုက်ကောက်နေတာ တွေ့မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်္ကြန်ဆိုတာက အနည်းဆုံး ၄ရက်ကနေ ၅ရက် ကျင်းပတာမို့ ပွဲတော်ချိန်တွင်းမှာ လမ်းတစ်လျှောက် ညစ်ပတ်နေတာများ မြင်မကောင်းဘူး။
အားလုံးထဲမှာ အကိုက်ဆုံးက ဘီယာဘူးခွံတွေ လိုက်ကောက်တဲ့ သူတွေပဲ။ ကြည့်ဦး။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ သင်္ကြန်လည်တဲ့ လူတွေ တစ်ယောက်ကို ၃ဘူးစီပဲ သောက်တယ်ထား။ နည်းမလား။ အန်တီချစ်ကြည်အေးတွေ့တာ တော့ မိန်းကလေးတွေကအစ ပုလင်းလိုက်မော့သောက်နေကြတာပဲ။ နိူ့ ဘာနဲ့သောက်ရမှာတုန်း အန်တီ…။ အိမ်း…အဲ….။ အေးလေ ပုလင်းလိုက်မော့တော့ နောက်က ဖန်ခွက်မကုန်တော့ဘူးပေါ့။ လုပ်ပါ လုပ်ပါ။ ရိုက်ပေါက်ဖြစ်နေမစိုးလို့ စကားကို ကြည့်ပြောရသေးတယ်။ တော်ကြာ အန်တီချစ်ကြည်အေးကို ဒိုင်နိူဆောရုပ်ကြွင်း မှတ်နေဦးမယ်။
သင်္ကြန်ဆိုတာက အန်တီချစ်ကြည်အေးတို့ ငယ်ငယ်ကနဲ့ အခု ပျော်ကြပုံချင်း ကွာခြားသွားပြီ။ ဟိုတုန်းကလည်း သောက်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ခုလောက် မများဘူး။ ခုလောက် ပေါ်ပေါ်တင်တင် မသောက်ရဲကြဘူး။ ညနေလောက်မှ အချမ်းပြေဆိုပြီး သောက်ကြတာ။ ခုကတော့ မနက်လင်း တာနဲ့ သောက်ကြတော့တာ။ သင်္ကြန်ဆိုတာ တရားဝင် သောက်ပွဲကြီးများလားတောင် ထင်ရတယ်။
သောက်ကြတော့ ဘာဖြစ်လဲ။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ရေပက်ခံထွက်ကြတဲ့ အခါမှာ သောက်တော့ မူး၊ မူးတော့ မောင်းတဲ့အခါ အန္တာရာယ် များကုန်ကြတော့တာပေါ့။ အန်တီချစ်ကြည်အေးတို့ မျက်စေ့ရှေ့မှာတင် ဆိုင်ကယ်မှောက်တာ ၂ခါ ကြုံခဲ့ရတယ်။ တစ်စီးတည်းမဟုတ်ဘူး၊ ဘေးက ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ပါ ချိတ်မိပြီး ၃-၄စီးတွဲကြီး ဖြစ်ကြတာ။ အိမ်ကမိဘတွေ ဘယ်လောက် ရင်ကျိုးမလဲ စဉ်းစားသာကြည့်။
သင်္ကြန်ဆိုတာ ပျော်စရာ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ပွဲတော်ပါ။ ဆင်းရဲချမ်းသာ လူတန်းစား မရွေး သူ့နည်းနဲ့ သူ့ဟန် လူတိုင်း ပျော်နိူင်ကြတဲ့ ပွဲပါ။ အန္တာရာယ် မများစေဘဲ စည်းကမ်း တကျ ပျော်တတ်ကြရင် သိတ်ကောင်းမှာ ပဲလို့ အန်တီချစ်ကြည်အေးက တွေးမိပါတယ်။
မသောက်နဲ့ မပြောပါဘူး၊ နည်းနည်းပါးပါး သောက်။ မဖော်ကြနဲ့ မတိုကြနဲ့ မပြောချင်ပါဘူး၊ အရှက်တော့ လုံခြုံအောင် ၀တ်။ အမှိုက်တွေကိုလည်း စည်းကမ်းတကျ နေရာလေးသတ်မှတ်ပေးပြီး စည်းကမ်းရှိရှိ ပစ်။ ကားလမ်းတွေကိုလည်း ရေပက်ခံကားအတွက်၊ လမ်းသွားလမ်းလာ ယာဉ်တွေအတွက် လမ်းကြောင်းလေးတွေ သတ်မှတ်ပေးပေါ့။ ဒီလိုသာဆိုရင် သိတ်ကောင်းမှာပဲ။ ဒီနှစ်ဆို နိူင်ငံခြားသားတွေ လည်း တော်တော်များများ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ့်ရိုးရာပွဲတော်အပေါ် အထင်အမြင်မသေးစေချင်ဘူး။ စည်းကမ်းရှိရှိကျင်းပကြတာပါလားလို့ မြင်သွားစေ့ချင်တယ်။
ပွဲတော်ကြီးအပြီးမှာ " မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်အပေါ် ဘယ်လိုများ မြင်ပါသလဲအန်တီ"လို့များ မေးလာခဲ့ရင် "အရမ်း အရမ်းကို တိုကြ၊ ပြတ်ကြတာပါပဲ ကွယ်" လို့သာ ပြောလိုက်ချင်တော့တယ်။
အေးလေ။ ရာသီဥတုကလည်း ကြွပ်နေ ရွနေအောင် ပူသကို….။
Su Wed Apr 25, 09:52:00 PM GMT+8
သမြားလဲပူလွန်းလို့အိမ်မှာ ဘောင်းဘီတိုနဲ့နေမလို့ဟာကို ကလေးအဖေကလူလာတာနဲ့အဝတ်လဲခိုင်းတာဘဲဗျ
Ko Boyz Wed Apr 25, 10:06:00 PM GMT+8
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Wed Apr 25, 10:56:00 PM GMT+8
သင်္ကြန်မှာ ဖော်တဲ့ကိစ္စကို ရေးသူတွေကရေး. ပြောသူတွေက ပြောကြပေမဲ့ အဲဒီလူတွေကို ပြန်ပြီး ထိုးနှက်တဲ့လုတွေက ထိုးနှက်တော့ စိတ်ထဲပူမိတာက မတော်တရော်မြင်ရင်တောင် နောက်ဆိုရင် ပြောချင်တဲ့သူမှ ရှ်ိပါတော့မလား ပူမိတာပါဘဲ အစ်မရေ.
ခုတော့ တော်သေး အန်တီချစ်ကြည်အေးရှိလို့ :P
:P Thu Apr 26, 12:42:00 AM GMT+8
:P Thu Apr 26, 12:43:00 AM GMT+8
အန်တီစင်နဲ့ အမြင်တူပါတယ် အန်တီ
mabaydar Thu Apr 26, 01:44:00 AM GMT+8
ခုလိုမျိုး သတိထားသင့်တာလေးတွေကို voice out လုပ်ရင်း ဟာသလေးနဲ့ ရောရေးပေးတဲ့ မချစ်ကြည်အေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
အစ်မတို့လို လူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ များများလိုအပ်တယ်...
ကလူသစ် Thu Apr 26, 07:55:00 AM GMT+8
အမေပေးတဲ့အမွေနဲ့ပဲတက်ကကြမဲ့ သင်္ကြန်ကို စောင့်နေပါတယ်။
နေ၀သန် Thu Apr 26, 08:42:00 AM GMT+8
:).... မိန်းကလေးတွေက ပိုပူတယ်ထင်တယ်နော်... တိုသမှတို.. ယောက်ျားလေးတွေကျတော့လည်း.... လုံခြုံနေရောပဲ... :D
mstint Thu Apr 26, 08:55:00 AM GMT+8
မချစ်က အရေးအသားကောင်းတော့ ဖတ်ရတာကြည်နူးတယ်။
ခေတ်ရဲ့ရေစီးကြောင်း အပြောင်းအလဲတွေမှာ ကောင်းမှု မကောင်းမှုဆိုတာလေးတွေကတော့ အမြဲဒွန်တွဲပြီး ဟန်ချက်ညီညီ ရှိနေကြတာပေါ့လေ။
အင်ကြင်းသန့် Thu Apr 26, 10:26:00 AM GMT+8
သင်္ကြန်ရက်မှာ အဲဒီလို လွန်ကျူးတဲ့ အတိုအပြတ်၊ အဖော် အဟိုက်တွေ ၀တ်တာတွေကို အားပေးတဲ့သူတစ်ချို့ရှိနေတာကိုလည်း တွေ့ရလို့ သြချမိသေးတယ် အစ်မချစ်ရေ့....
အမ်တီအန် Thu Apr 26, 05:23:00 PM GMT+8
သင်္ကြန်ကတော့ မောသပါ့မောလွန်းလို့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ စိတ်ထဲက ချရေးလိုက်ချင်တာတွေ လက်က မလိုက်နိုင်ဖြစ်နေရတယ်။ စဉ်းစားမိတယ်... လိုက်မမှီတော့တာတွေ များလွန်းတော့ ကိုယ်တွေက အတော်များ အသက်တွေ ကြီးသွားလို့လားလို့....။ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်္ကြန်အရသာမျိုးတော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး အစ်မရေ..။
မောင်သီဟ Thu Apr 26, 06:01:00 PM GMT+8
အလှစ် အလပ် အပေါ် အဖော်း)း)
မြန်မာ့တွေ နှစ်ကူးတာ မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တယ်လား အစ်မရေး)
ကိုရင် Fri Apr 27, 01:05:00 AM GMT+8
ဟုတ်ကဲ့..ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး အန်တီ :D
အိမ့်ချမ်းမြေ့ Fri Apr 27, 09:20:00 AM GMT+8
စေတနာနဲ့ ၂၀၀၉တုန်းက ရေးခဲ့ဖူးတာလေး ရှိပေမယ့်
အခုတော့ ကိုယ့်လက်ကိုကိုယ် ငြိမ်နေဖို့ပြောထားပါတယ် :p
ညီလင်းသစ် Fri Apr 27, 03:51:00 PM GMT+8
စည်းကမ်းလည်းရှိ၊ စနစ်လည်းကျတဲ့ သင်္ကြန်ဖြစ်ဖို့ အမချစ်ကြည်အေး ပရိုပို့စ်လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေက ရိုးရိုးလေးနဲ့ ထိရောက်ပါတယ်၊ လူတွေ စည်းကမ်းမဲ့ ကားရပ်တာ၊ အမှိုက်ပစ်တာ မဖြစ်ရအောင် တာဝန်ရှိသူတွေ ဘက်ကလည်း လိုအပ်တာတွေ လုပ်ထားပေးသင့်တာပေါ့၊ humor touch လေးနဲ့ တိုတိုရှင်းရှင်း ထိမိတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲဗျာ..။
San San Htun Sat May 05, 07:58:00 AM GMT+8
ဟုတ်ပါ့ မမချစ်ရေ..သင်္ကြန်က ပျော်ဖို့ ထက် မြင်ရ၊ ကြားရတာ စိတ်မချမ်းသာစရာ